ဗေဒင် | Freedom News Group
Posts from the ‘ဗေဒင်’ Category
4 Comments	ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ( ၁၈.၉.၁၃ ) မှ ( ၂၄.၉.၁၃ ) အထိတပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း
ရေခြားမြေခြား ပင်လယ်ရပ်ခြားခရီးသွားရတတ်သည်။ သို့မဟုတ် မိမိမရောက်ဖူးသောဒေသ Read more
10 Comments	ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ( ၁၁.၉.၁၃ ) မှ ( ၁၇.၉.၁၃) အထိ တပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း
လေယာဉ်ခရီး၊ ပျော်ရွှင်သောခရီးသွားရတတ်ခြင်း၊ ရပ်ဝေးမှလက်ဆောင်ပစ္စည်းများရောက်လာ Read more
1 Comment	The 2013 Year of Snake | မြွေနှစ် ၂၀၁၃ အဟော
2013 is the year of the black Snake begins on February 10th shortly after the New moon in Aquarius, the humanitarian of the zodiac. This 2013 year of Snake is meant for steady progress and attention to detail. Read more
1 Comment	ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ( ၂၄.၁၂.၁၂ ) မှ ( ၃၀ .၁၂.၁၂ ) အထိတပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း
ဗေဒင်ပညာရှင်- ဆွေဇင်ဝတီ ( ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏တပည့် )
အလုပ်တွင်ပင်ပင်ပမ်းပမ်းလုပ်ကိုင်နေရတတ်ခြင်း၊ လူမူရေးများဆက်တိုက်လုပ်နေရခြင်း၊ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Dec 17
နိုင်ငံခြားနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများလုပ်ကိုင်နေရတတ်သည်။ မိတ်ဆွေများကိုကူညီမှု Read more
ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးနှစ်မျိုးစလုံးသွားရတတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ရတတ်ခြင်း၊ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Nov 26
6 Comments	ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ( ၂၆.၁၁.၁၂) မှ (၂.၁၂.၁၂) အထိ တပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း
လေယာဉ်ခရီး၊ ပျော်ရွှင်သောခရီးသွားရခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။ နိုင်ငံခြားသွားရန်ပြင်ဆင်နေ
သူများနိုင်ငံရပ်ခြားခရီးလည်းဖြစ်တတ်သည်။ အလုပ်တွင်နေရာကောင်းရနေခြင်း၊ နာမည်ကောင်း Read more
စက်ပစ္စည်းများဝင်ခြင်း၊ အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရတတ်ခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ ဖုန်းထွက်တတ်ခြင်း၊
ကွန်ပြူတာထွက်ခြင်း၊ မြေထွက်ခြင်း၊ ကြာသပတေးနံပစ္စည်း Read more
လာတတ်သည်။ မလုပ်ပါနှင့်၊ မအောင်မြင်သေးသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ငွေဝင်မည်။ အကျိုးမရှိကုန် Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Nov 5
နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးကောင်းနေခြင်း၊ လူမျိုးခြားများ၏ကူညီမှုရခြင်း၊ ရွှေ၊ နာရီဝင်ခြင်း၊ လက်အောက်ငယ်
သားရောက်လာခြင်း၊ ရွှေလက်ကောက်ဝင်ခြင်း၊ မြေ၀င်ခြင်း၊ ကွန်ပြူတာဝင်ခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ Read more
1 Comment	ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ( ၂၉.၁၀.၁၂ ) မှ ( ၄.၁၁.၁၂) ထိ တပတ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း
နိုင်ငံခြားနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းများလုပ်ရခြင်း၊ လူမျိုးခြားများ၏ကူညီမှုရခြင်း၊ ထီပေါက်တတ်ခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ ပျော်ရွှင်သောခရီး၊ လေယာဉ်ခရီးသွားရတတ်သည်။ Read more